အကောင်းဆုံးအခမဲ့အားလုံးသည် PDF ဖိုင်ရယူရန် Reader ကိုနှင့် Viewer ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » အားလုံး PDF ဖိုင်ရယူရန် Reader ကို, PDF ကိုကြည့်ရှုသူ & Tools များ
အားလုံး PDF ဖိုင်ရယူရန် Reader ကို, PDF ကိုကြည့်ရှုသူ & Tools များ APK ကို
PDF ဖိုင်ရယူရန် Reader ကို - PDF ကို converter ကိုအကောင်းဆုံး PDF ကိုစာဖတ်သူ, pdf အယ်ဒီတာနှင့် PDF tools များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ Adobe Reader ကဲ့သို့အခြား PDF ကိုစာဖတ်သူများအတွက်သာမန်အားဖြင့်ပရီမီယံ features တွေအဖြစ်ရရှိနိုင်သောအခမဲ့ရရှိနိုင်သော features တွေအများကြီးရှိပါတယ် android နှင့် PDF converter ကိုများအတွက် Pdf စာဖတ်သူများအခမဲ့ဒီ pdf reader ကိုနှင့် pdf အယ်ဒီတာ apps.Download နှင့်နေသောများစွာသောပရီမီယံ features တွေရ ဤအစာရွက်စာတမ်းစာဖတ်သူကို apps များအတွက်လက်ရှိ။ Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe PDF, Foxit MobilePDF, Xodo PDF ဖိုင်ရယူရန် Reader ကိုနှင့်ပိုပြီး
PDF ကိုစာဖတ်သူတွေကို PDF Viewer
★လျင်မြန်စွာအားလုံးသင့်ရဲ့ PDF files တွေကိုစာရင်းထဲကသို့မဟုတ်မကြာသေးမီဖိုင်တွေရဲ့စာရင်းထဲကသင့်ရဲ့ device အတွက်မဆို PDF ကိုစာရွက်စာတမ်းဖွင့်လှစ်
စတားစာရင်းထဲတွင်★ရာဌာနအရေးအပါဆုံး PDF documents တွေသင်အလွယ်တကူနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုရှာတှေ့နိုငျဒါ။
★စာရင်းတစ်ခုအတွက် PDF ကိုစာရင်းသို့မဟုတ်ဤစာရွက်စာတမ်းစာဖတ်သူအတွက် PDF ဖိုင် thumbnail ကိုပြသတဲ့ဇယားကွက်အမြင်ကြည့်ရှုပါ။
ဖိုင်မန်နေဂျာထံမှသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်စသည်တို့ကို WhatsApp ကိုဂျီမေးလ် (အီးမေးလ်ပူးတွဲဖိုင်ကို) ကဲ့သို့သောအခြားအက်ပ်များမှ★ပွင့်လင်း PDF files တွေကို
★ Scroll PDF ကိုစာမကျြနှာမြားနှငျ့ zoom ကိုနှင့်တော့ပါ။
★လွယ်ကူစွာဒီ app မှတဆင့် PDF documents တွေဝေမျှ
★ပရင့်ထုတ်ရန် PDF ဖိုင်ရယူရန်ဤစာရွက်စာတမ်းစာဖတ်သူကို အသုံးပြု. သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှတိုက်ရိုက်ဖိုင်များကို။
★ Bookmark စာမျက်နှာများနှင့်စာရွက်စာတမ်းစာဖတ်သူအနေဖြင့် contents တွေကိုများ၏ပြပွဲ PDF ကိုစားပွဲပေါ်မှာ
★ pdf ebook reader ကို / pdf reader ကို
★သင်ဟာဒီ app ကနေ Evernote အားဖြင့်သင်တို့၏ pdf ဖိုင်တွေမျှဝေနိုင်ပါသည်
★ဖတ် password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက် PDF documents တွေ
★အကွိမျမြားစှာကြည့် options တွေကိုအလျားလိုက်နဲ့ဒေါင်လိုက်စာစောင်ကိုဒီ pdf နှင့်စာရွက်စာတမ်းစာဖတ်သူအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
★ PDF files တွေကိုပေါင်းစပ်, တစ်ခုတည်းဖိုင်ထဲမှာမျိုးစုံ PDF files တွေကိုပေါင်းစည်းမည်။ pdf file တွေကို join
★ပေါင်းစည်းမတိုင်မီ PDF files တွေကိုစုစည်း
★ PDF ကိုပေါင်းစည်းမည်
Split PDF ကို FILE ကို
★မျိုးစုံစာမျက်နှာများသို့တစ်ခုတည်း PDF ကိုစာရွက်စာတမ်းခွဲပစ်ရန်။ ဒီ app တစ်ခုတည်းကို PDF ဖိုင် (pdf splitter) အဖြစ်တိုင်းစာမျက်နှာဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
★ Split ကိုအားလုံးစာမျက်နှာများသို့မဟုတ်စာမျက်နှာများသတ်မှတ်ထားသောစာမျက်နှာသို့မဟုတ်အကွာအဝေးကနေ
★ PDF ကို Document ကနေအပေါငျးတို့သပုံရိပ်တွေ Extract နှင့် folder ထဲမှာ save
★တစ်ဦးချင်းစီရုပ်ပုံများအဖြစ်အားလုံး PDF ကိုစာမကျြနှာကို Save ။
JPG မှ★ pdf, ပုံရိပ်မှ pdf, ဓါတ်ပုံများဖို့ pdf
လူအပေါင်းတို့သည်စာမကျြနှာများပါဝင်သည်အရာတစ်ခုတည်းပုံရိပ်အဖြစ်★ဝေမျှမယ် PDF ဖိုင်
★ Re-မိန့်သို့မဟုတ်ဆွဲအားဖြင့်အလွယ်တကူ PDF ဖိုင်ရယူရန်စာမျက်နှာနံပါတ်များကိုစည်းရုံးပြီးစာမျက်နှာ preview ကို drop ။
★ကို un-လိုချင်စာမျက်နှာများကိုဖျက်ပစ်ပါနှင့်တည်းဖြတ် PDF ကိုကယ်တင်
★သင်ဟာ PDF ကိုစာရွက်စာတမ်း meta ခေါင်းစဉ်နဲ့တူဒေတာ, စာရေးဆရာ, ဖန်ဆင်းရှင်, ထုတ်ဝေသူ, အကြောင်းအရာနှင့်သော့ချက်စာလုံးများတည်းဖြတ်နိုင်သည်
PDF ဖိုင်ဖိုင်ကို Compress
★ပုံရိပ်အရည်အသွေးနှင့်ကို un-လိုအပ်သော PDF ကိုစာရွက်စာတမ်း data တွေကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် PDF ကိုဖိုင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချပါ။ PDF ကိုတွန်း
PDF ကို converter
★ PDF File တွေကို (jpg) ပုံရိပ်သို့ပြောင်း
ရုပ်ပုံများမှ PDF ဖိုင်ရယူရန်
★ပုံရိပ်တွေကနေ PDF ကိုစာရွက်စာတမ်း Create
★မရွေးစာရွက်စာတမ်းစာမကျြနှာကနေ Extract text file TXT မှ
အားလုံးတွင် PDF reader, အခမဲ့ pdf အယ်ဒီတာ Download - PDF ကို converter နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဘို့ဤအရာအလုံးစုံ features တွေပျော်မွေ့။ pdf Annotation, pdf အယ်ဒီတာအခမဲ့, pdf စကင်နာသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းစကင်နာများကဲ့သို့အများအပြားကပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ features တွေထည့်သွင်းခံရဖို့။
PDF ကို converter ကိုပင်ပိုကောင်း - အားလုံး PDF ကိုစာဖတ်သူလုပ်ကာစိတ်ကူးရှိပါသလား? ငါကိုဆက်သွယ်ပါကနားကြားခြင်းချစ်ကြလိမ့်မည် robert.a.londo@gmail.com
SD ကဒ်ကနေ★ Browse ကို PDF files တွေကို
★ Built-in စာသားကိုကြည့်ရှုသူ
★သင်ဟာ PDF ကိုလုံခြုံရေးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
★ Bug ပြုပြင်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု
အားလုံး PDF ဖိုင်ရယူရန် Reader ကို, PDF ကိုကြည့်ရှုသူ & Tools များ
16.30 ကို MB
စာရွက်စာတမ်း Viewer ကို
WPS PDF- Lite PDF ကို ...
သမ်မာကမျြးရုံး - ...
Office ကို Viewer ကို - ...